Dhowr maalmood kahor anigoo shaqada guriga joogaya, waxaan ku arkay xayeysiis waddada lagu xayeysiinayo tifaftirka hadda joornaal. Qoraalka dhejiska ah ayaa la akhriyay waxyaabaha soo socda: "Mandela waa Ciise". Hadalkaan marki ugu horaysay ayaa naxay. Sidee qof u odhan karaa wax sidaas oo kale ah! Mandela waa shaqsi gaar ah, laakiin miyaad barbar dhigi kartaa Ciise ama ma isaga saari kartaan isla heerkaas? Si kastaba ha noqotee, qoraalkan ayaa igu dhajiyay fikirka. Marka laga soo tago Mandela, dad badan oo gaar ah ayaa ku noolaa dhulkaan. 100-kii sano ee la soo dhaafay oo keliya waxaa jiray dad sida Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr iyo sidoo kale Nelson Mandela kuwaas oo, sida Ciise oo kale ah, ay soo mareen caddaalad-darrooyinka waxayna ka adkaadeen caqabado aan loo dulqaadan karin oo xitaa helay aqoonsi caalami ah. Mid kasta oo iyaga ka mid ah waxay ku dhibtoodeen hab iyaga u gaar ah. Waa la garaacay, la xirey, loo hanjabay, la cabsi geliyey, oo xitaa la dilay. Xaaladaha Gaandi iyo Martin Luther King Jr, labaduba waxay ku bixiyeen naftooda. Marka muxuu Ciise ka dhigayaa mid gaar ah? Waa maxay sababta in kabadan laba bilyan oo masiixiyiin ah caabudaan isaga?
Gaandi, Martin Luther King Jr., iyo Nelson Mandela midkoodna weligood ma sheegan inay yihiin dembi la'aan. Laakiin Axdiga Cusubi dad badani waxay ka marag furayaan in Ciise u baahan yahay xiriir dhow oo uu inala yeesho; ma jiro qof kale oo bini’aadanka kari kara oo sameeya aayadda xaqiiqda ah in Ciise aanu dambi lahayn. 1 Butros 2,22:4,15 waxaan ka akhrisan karnaa waxyaabaha soo socda: "Kii aan dembaabin oo afkiisu khiyaanona lahayn" iyo Cibraaniyada XNUMX:XNUMX "Waayo, innagu ma lihin wadaad sare oo aan itaal darrkeenna u adkaysan karin. laakiin yaa lagu tijaabiyay wax walba oo annaga sidii oo kale ah, laakiinse isagoo aan dembaabin. Ciise wuu fiicnaa, oo si ka duwan Mandela iyo kuwa kaleba, weligood ma dembaabin.
Gaandi, Martin Luther King Jr, ama Nelson Mandela midkoodna weligiis ma sheegan inuu Ilaah yahay, laakiin Ciise sidaas ayuu yeelay. John 10,30:XNUMX, wuxuu leeyahay "Aniga iyo Aabbuhu mid baan nahay," iyagoo tixraacaya Ilaah qudhiisa Caddayntu waa mid aad u geesinimo leh haddana ciise. Sababtaas awgeed ayaa Yuhuuddu waxay doonayeen inay iskutallaabta ku qodbaan.
Falimaha Rasuullada 2,22: 23-5000, rasuulku wuxuu qoray tan soo socota ee Bentakostiga: “Rag yahow reer binu Israa'iilow, maqla erayadan: Ciisihii reer Naasared, oo Ilaah idinka muujiyey shuqullada iyo mucjisooyinka iyo calaamooyinka uu Ilaah ku dhex sameeyey isaga dhexdiisa Sidaad naftaada u ogtahay, ninkan baad ku garaacday xagga Ilaah talada iyo bixinta, iskutallaabta oo ku dishay gacanta kuwa aan Yuhuudda ahayn. Butros wuxuu la hadlayaa dadkii Ciise yaqaan. Waxay arkeen mucjisooyinka uu sameeyay, qaarkoodna malaha xataa halkaas ayuu taagay markuu Laasaros sara kiciyey, oo la siiyay 700 oo rag ah (haween iyo carruur aan lagu darin) cunno, kaxayn jinniyo xunxun oo bogsiiyey bukaanka iyo curyaannada. Dad badan ayaa ka markhaati kacay sarakiciddiisa wayna arkeen. Isagu nin uun ma ahayn. Kaliya ma uusan hadlin, laakiin wuxuu ku shaqeeyay hadalkiisa. In kasta oo maanta tikniyoolajiyadda casriga ah, qofna fahmi karin mucjisooyinka Ciise sameeyey. Ma jiro qof maanta biyo u rogi kara khamri, Oo dadka ka sara kicin kara, oo cuntada u kordhin kara. In kasta oo waxyaalahan oo dhami ay yihiin kuwa aad u yaab badan, haddana xaqiiqda ah inaan aad uga helo mucjisooyinka mucjisada ah ee Ciise sameeyey waa sababta oo ah in ka badan 300 oo waxsii sheegyada ay tahay in uu rumoobo Masiixa isla markaana Ciise midkasta uu fuliyay. Waxsii sheegyadaasi waxaa la sameeyay in kabadan kun sano kahor dhalashadiisa. Si runtii loo fahmo sida ay gaarka u tahay tan iyo markii Ciise fuliyay waxsii sheegyadaan, qofku waa inuu eegaa macquul ahaan tirakoobka inuu qof fulinayo dhammaan waxsii sheegyadaas. Haddii aan eegnay suurtagalnimada qof kasta oo fulinaya waxsii sheegyadii 1 ee ugu muhiimsanaa ee ku saabsan Ciise, itimaalku wuxuu noqon karaa 10; (Hal mid leh 157 ዜro). Fursadaha in Ciise ku dhacay si uu u fuliyo waxsii sheegyada oo dhami way yaryihiin oo waxay umuuqataa wax aan macquul aheyn. Sharaxa kaliya ee sida Ciise u awoodo inuu fuliyo waxsii sheegyadaas oo dhan waa sababta oo ah isagu isagu waa Ilaah wuxuuna u hareeyay dhacdooyinka sidan.
sida Gandhi, Martin Luther King Jr, iyo Mandela waxay lahaayeen dad badan oo raacsan, laakiin uma suurtoobin qof caadi ah inuu xidhiidh la yeesho. Ciise, dhanka kale, wuxuu nagu casuumay inaan xiriir gaar ah la lahaano isaga. Yooxanaa 17,20: 23-XNUMX wuxuu tukanayaa ereyadan soo socda: “Laakiin anigu uma duceeyo iyaga, laakiin waxaan u baryayaa kuwa igu rumaystaa eraygooda si ay dhammaantood isku mid yihiin. Sida aabbe oo kale adigaa igu jira, anna aan adiga kugu dhex jiraa, sidaas oo ay tahay inay nagu jiraan, in dunidu rumeysan tahay inaad adigu i soo dirtay. Oo waxaan iyaga ku ammaanay ammaantaad i siisay inay mid ahaadaan, sidaan nahay, anna annagaa dhex joognay, annaguna anigaad igu jirtaa, inay mid ahaadaan isla markaana dunida yaqaan, maxaa yeelay adigu waad i soo dirtay oo aad jeclaatay. sida aad ii jeceshahay.